फरार अभियुक्त समात्न प्रहरी सक्रियता
दमौली । केही दिनयता तनहुँ प्रहरीले विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्नताको आरोप लागेका फरार व्यक्तिहरुलाई पक्राउ थालेको छ । नयाँ प्रहरी प्रमुखका रुपमा सिद्धिविक्रम शाह आएसँगै उनले विगतका विभिन्न घटनामा फरार अभियुक्तलाई प्राथमिकताका साथ पक्रिएको
बताए । ‘कानून पालना गराउनका लागि आपराधिक घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्नुलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु,’ उनले भने । शाहले अबका केही दिनमा यस्ता फरार अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताए । ‘पहिले फरार पक्राउ गरे पछि अरु थप सुरक्षा व्यवस्थापनका काम अघि बढ्छन्,’ उनले भने ।
प्रहरीले गत फागुन ९ गते म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. ६ मा सन्जिव राई समेतमाथि भएको खुकुरी प्रहारको घटनामा मिलन पौडेलसँगै संलग्न भन्दै सौरभ कायस्थलाई पक्रेको छ । उनलाई अदालत पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गत भदौ २० गते व्यास ४ स्थित डूाईभ इन होटलमा बिरेन गुरुङमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको घटनामा ज्योती रोकालाई व्यास १ गल्बुबेसीस्थित निवासबाट पक्रेको छ ।
घटनामा शुरुमा जाहेरी नै नपरेको बताइए पनि घाइते अमिर गुरुङको जाहेरीका आधारमा रोकालाई पक्रिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिल मल्लले बताए । प्रहरीले शनिबार व्यास ४ निवासी २० वर्षका मिलन क्याटे भन्ने मोहित गुरुङलाई धारिलो हतियार खुकुरी साथमा लिएर हिंड्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको छ ।
ठक्कर दिएर भाग्ने पक्राउ
शनिबार व्यास १ सुगम पेटूोलपम्प नजिकै एक महिलालाई ठक्कर दिएर परार टूकलाई पनि पहरीले पक्रेको छ । घटनाकै दिन महिलाको उपचारका क्रममा पोखरामा ज्यान गएको थियो ।
घटनालगत्तै खोजीका क्रममा खैरेनीटारबाट बिरगंज जाँदै गरेको लु २ ख १०७ नं. को टूकलाई नियन्त्रणमा लिए पनि ढाँटेर फरार भएकोमा पछि मकवानपुरबाट नियन्त्रणमा लिएर चालक पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ३० गगनगौंडा निवासी २७ वर्षका शुरेश गुरुङलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मल्लले बताए । यस्तै प्रहरीले आईतबार भानु ३ खहरेस्थित मस्र्याङदी नदीमा जेसिबी लगाएर उत्खनन गर्दै गरेको अवस्थामा बा १ क ९७९६ नं. को जेसिबीका सञ्चालक सुजन गुरुङ र आकाश गुरुङलाई पक्रेर थप कारवाहीका लागि जिल्ला समन्वय सपितिमा पठाइएको प्रहरी उपरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहले बताए ।
उनले आफू कानून पालना गराउन प्रतिवद्ध रहेको भन्दै नियमविपरित काम गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने बताए । उनी प्रमुख भएर आएको केही दिनमै प्रहरीले फरार अभियुक्तलाई प्राथमिकताका साथ पक्रन थालेको